Waraana Tigraay: ‘Barattoonni karaa gubbaatti butamanii hafan jiru’ – Kichuu
Waraana Tigraay: ‘Barattoonni karaa gubbaatti butamanii hafan jiru’
Waraana Tigraay: ‘Barattoonni karaa gubbaatti butamanii hafan jiru’ – Barattoota Yunvarsiitii Raayyaa
Ibsa waa’ee suuraa,
Barattoota Yuunvarsiitii Raayyaa
Mootummaan Federaalaa Tigiraayitti dhukaasa dhaabu labsuufi waraana naannichaa baasuu hordofee barattoonni yaadda’uun Yuunvarsiitii Raayyaa mooraa Maayicaw keessaa bahan ‘‘karaa gubbaatti butamanii hafan jiraachuu’’ himan.
Barattoota Waldiyaatti argaman BBC’n haasofsiise Raayyaa Ittisaatiin eegumsi taasifamaafi akka ture ibsuun, waraanni naannicha bahu hordofee halkan mooraa gadhiisanii bahuu dubbatan.
Maatiin barattootasaanii Yuunvarsiitiiwwan Naannoo Tigiraayitti ergan mootummaan ijoolleesaanii akka iddoo sanaa akka baasaniifi nageenyasaanii akka ifa godhu gaafataniiru.
Tigiraayitti tajaajilli intarnetiifi bilbilaa cufaa ta’uusaatiin haala barattootni irra jiran BBC’n mirkaneeffachuu hin dandeenye.
Ministeerri Saayinsiifi Barnoota Olaanaa toora Feesbuukiisaarratti akka barreesseetti, baratoonni haala gaarii irratti akka argaman ibsuun, dhaabbilee gargaarsaa idil-addunyaa wajjin hojjachaa jiraachuu ibseera.
Barattoonni qorumsa seemisteera lammaffaa qoramuuf qopha’aa akka jiran ministeerichi ibseera.
Loltoonni mootummaa Federaalaa Maqalee gadhiisanii bahuu hordofee humnoonni TPLF magaalicha Wixata darbe to’ataniiru.
Yuunvarsiitii Raayyaa Kaampaasii maayicawitti barattuun barnota lammummaaf amala gaarii Sinidduu Gabayaaw, Wiixata darbe halkan sa’aatii 6tti barattoota biroo wajjin mooraa yuunvarsiitii keessaa bahuu BBCtti himte.
‘’Kanaan dura Raayyaa Ittisaa gaaddisa godhanneetu baranna turre, loltoonni naannicha guutummaatti gadhiisanii baanaan lubbuu keenyaaf yaaddofnee baane, mi’a keenyallee hin fudhanne’’ jetti.
Barattoonni 200 ol ta’an halkan miilaan deemaa bulanii barii jala, sa’aatii 11tti magaalaa Mahoonii jedhamtu qaqqabuusaanii dubbatti.
Sinidduun akka jettutti Maayicawiifi Mahonii gidduu 20km fagaata.
‘’Miilaan otoo adeemnuu loltoota Raayyaa Ittisa biyyaa qaqqabne, achii booda Allamaaxaa seenne. Allamaaxaa amma Qobbootti konkolaataa nu yaabbachisan. Qobboorraa Waldiyaa seenne,’’ jetti.
Sinidduun miilaan wayita deemanitti miidhaan addatti irra qaqqabe akka hin jirre jiraachuu baatus, ’’barattoota bishaan dhuguuf gara boodaatti hafan keessaa 5 amma eessa akka jiran hin beekamu’’ jette.
Sinidduutin wayita BBC’n dubbisetti Yuunvarsiitiin Waldiyaa barattoota Qoobborraa dhufan simatee gara iddoo irraa dhufanitti gaggessaa ture.
Barattoonni hiriyootasaanii Yuunvarsiitii keessatti hafan akka bahaniif haallii mijachuu qaba, barattoonni hafan haalli keessa jiran akka qoratamu mootummmaa gaafataniiru.
Bulchaan Godina Walloo Kaabaa obbo Yifruu Zarihuun, barattoota Yuunvarsiitii Raayyaa mooraa Maayicaw irraa dhufan 220 gara iddoo irraa dhufanitti gaggeessaa jiraachuu BBCtti himaniiru.
Obboo Yifiruun akka jedhanitti, barattoonni sodaatanii kaampaasicha gadhiisanii bahan Roobii darberraa qabee Yuunvarsiitii Waldiyaa keessa turan.
‘’Barattootta Qobboorra dhufan Yuunvarsiitichi simachuun baasii isaanii danda’uun, konkolaataan gara iddoo irraa dhufaniitti gaggeessaa jira’’ jedhan.
Yuunvarsiiitiiwwaan Naannoo Tigiraayitti argaman keessatti barattoonni hedduun barnootasaanii hordofaa kan jiran yoo ta’u, mootummaan Federaalaa dhukaasa dhaabuu labsuu hordofee tajaajilli bilbilaaf qunnamtii adda cituusaatiin maatiin barattootaa yaadda’aa jiru.
Ministeerri Saayinsiifi Barnoota Olaanoo nageenyi barattoota akka eegamuuf tattaaffii barbaachisuu gochaa jiraaachuu beeksisera.
Naannoo Tigraay bulchaa kan ture TPLF haleellaa Ajaja Waraanaa Kaabaa biyyattii haleelu hordofee ji’ootan saddeet darban Raayyaa Ittisa biyyaa wajjin walwaaraanaa ture.
Dirree Dhawaa Yuunvarsiitii: “Barattoota 5000(kuma shan) ol kan taanuu Kophee nurra baasuun